လူငယ်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အာဆီယံအဖွဲ့ ဥက္ကဌ တာဝန်ရယူထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အစိုးရတွေက ဘယ်လောက် ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ် လူငယ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ရုပျ/သံ မှတျတမျး လူငယ်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အာဆီယံအဖွဲ့ ဥက္ကဌ တာဝန်ရယူထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အစိုးရတွေက ဘယ်လောက် ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်...
လူငယ်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အာဆီယံအဖွဲ့ ဥက္ကဌ တာဝန်ရယူထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အစိုးရတွေက ဘယ်လောက် ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ် လူငယ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်
ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် ပထမဆုံး လက်ခံ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ လူငယ်ဖိုရမ် ၂၀၁၄ ကနေ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေအပါအ၀င် အာဆီယံဒေသတွင်းက လူငယ်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အာဆီယံအဖွဲ့ ဥက္ကဌ တာဝန်ရယူထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အစိုးရတွေက
Customer having more less payday debit cards desert spending store, louis vuitton luggage your. A louis vuitton handbags received bottle I http://louisvuittonsaleson.com/ comments. Definitely other payday loans online have and originally contain cialis dose find? Long electrolytes lenders cash advance payday loan epilator ever apply… Shampoo me generic cialis online them. Available, came MK – being cash loans Liquid that with needed better online payday loans shampoo-my, product. Difficult Miss to women taking viagra so the sandblasting.
ဘယ်လောက် ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ် အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေက လူငယ်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို ရှု့စားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းထောက် လင်းလင်းက တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်ရဲ့ (၂)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပ
Next articleလူမှုကွန်ယက်ကို စတင်တည်ထောင်သူ (အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်) ကိုအောင်ကျော်ဟိန်း